Poland Russia Ukraine War,Ukrainian refugees gather atarailway station in Przemysl, southeastern Poland, on Wednesday, March 23, 2022. Poland has received more than2million Ukrainian refugees since the Feb. 24 invasion. (AP Photo/Sergei Grits)
ပြင်သစ်အစိုးရအနေနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေကို အရေးပေါ်ယာယီတည်းခိုရာဖို့ နေရာတွေမှာထားပြီးနောက်၊ နေထိုင်ရေးနဲ့ မိသားစုအတွက် အထောက်အပံ့ တွေရရှိအောင်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့ ပြင်သစ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သောကြာနေ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အိုးအိမ်မဲ့သွားတဲ့ ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေကို အိုးအိမ်ရရှိဖို့၊ မိသားစုအထောက်ပံ့ရရှိဖို့နဲ့၊ မိသားစုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အထောက်အပံ့တွေကို ရယူခံစားခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကစပြီး ပြင်သစ်ကို ယူကရိန်းဒုက္ခသည် ၅ သောင်း ၇ ထောင်ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အများစုဟာ၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ၄ သောင်း ၁ ထောင်ကျော်ကို ယာယီကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု ခံစားခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ယူကရိန်း ခလေးငယ် ၁ သောင်း ၁ ထောင်ကျော်ဟာ ပြင်သစ်ကျောင်းတွေမှာ လက်ခံအပ်နှံထားပြီး၊ ကျောင်းတက်တဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းအခမဲ့ ထားခွင့်လည်းပြုထားပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ရုရှားက ယူကရိန်းကို စတင်ကျူးကျော်ပြီးနောက် အခုနောက်ဆုံးအချိန်အထိ ယူကရိန်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၄ သန်း ၇ သိန်းကျော်ဟာ တိုင်းပြည်စွန့်ခွါထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဌာန က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ယူကရိန်း ဒုက္ခသည် ၄ သောင်းကျော် ပြင်သစ် ကူညီစောင့်ရှောက်ထား.
ယူကရိနျး ဒုက်ခသညျ ၄ သောငျးကြျော ပွငျသဈ ကူညီစောငျ့ရှောကျထား
ပွငျသဈအစိုးရအနနေဲ့ ပွငျသဈနိုငျငံကိုရောကျရှိလာတဲ့ ယူကရိနျးဒုက်ခသညျတှကေို အရေးပျေါယာယီတညျးခိုရာဖို့ နရောတှမှောထားပွီးနောကျ၊ နထေိုငျရေးနဲ့ မိသားစုအတှကျ အထောကျအပံ့ တှရေရှိအောငျစီစဉျပေးသှားမယျလို့ ပွငျသဈပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက သောကွာနကေ့ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
အိုးအိမျမဲ့သှားတဲ့ ယူကရိနျးဒုက်ခသညျတှကေို အိုးအိမျရရှိဖို့၊ မိသားစုအထောကျပံ့ရရှိဖို့နဲ့၊ မိသားစုဆကျလကျရှငျသနျနိုငျဖို့ အထောကျအပံ့တှကေို ရယူခံစားခှငျ့ပေးသှားမယျလို့ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ကွညောခကျြမှ ဖျေါပွထားပါတယျ။
ယူကရိနျးစဈပှဲစတငျခဲ့တဲ့ ဖဖေျေါဝါရီလ ၂၄ ရကျနကေ့စပွီး ပွငျသဈကို ယူကရိနျးဒုက်ခသညျ ၅ သောငျး ၇ ထောငျကြျောရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ အမြားစုဟာ၊ အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယျတှဖွေဈကွပါတယျ။ အဲဒီအထဲက ၄ သောငျး ၁ ထောငျကြျောကို ယာယီကာကှယျ စောငျ့ရှောကျမှု ခံစားခှငျ့ပေးထားပွီးဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ယူကရိနျး ခလေးငယျ ၁ သောငျး ၁ ထောငျကြျောဟာ ပွငျသဈကြောငျးတှမှော လကျခံအပျနှံထားပွီး၊ ကြောငျးတကျတဲ့ အရှယျမရောကျသေးတဲ့ ကလေးငယျတှကေို နကေ့လေးထိနျးကြောငျးအခမဲ့ ထားခှငျ့လညျးပွုထားပါတယျ။
ဖဖေျေါဝါရီလ ရုရှားက ယူကရိနျးကို စတငျကြူးကြျောပွီးနောကျ အခုနောကျဆုံးအခြိနျအထိ ယူကရိနျး စဈပွေးဒုက်ခသညျ ၄ သနျး ၇ သိနျးကြျောဟာ တိုငျးပွညျစှနျ့ခှါထှကျပွေးခဲ့ကွတယျလို့ ကုလသမဂ်ဂဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာဌာန က ထုတျပွနျထားပါတယျ။
မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကဝင်လာတဲ့ ယူကရိန်းနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသားများ